Akpa Ngwa - Weibo Electronic Co., Ltd.
Ọnọdụ Ngwa - Industrylọ Ọrụ Nkwukọrịta
Weibo Electronic amalitela usoro nhazi usoro ike zuru oke atọ, usoro ikuku ụgbọ okporo ígwè dị iche iche na nyocha ọhụụ maka nyocha nke ike nke nyocha akụrụngwa akụrụngwa, nlekota akụrụngwa ikuku, nkwukọrịta ike nkwukọrịta, nlekota batrị na njikwa . A usoro nke raara onwe mwepu sensọ, dị ka ihe mmetụta mmetụta ihe mmetụta, AC transmitter sensọ na batrị esịtidem na-eguzogide sensọ, e mere na elu pụrụ ịdabere, elu nkenke, elu iche, obosara nzaghachi na mbara okpomọkụ nso site akpan enwekwukwa EMC na àmụmà nchedo. Ike oriri dị ala na atụmatụ ndị ọzọ na-eme ka arụmọrụ nke usoro mgbasa ozi jikọtara ya.
Nkwukọrịta ụlọ ọrụ nkwukọrịta
Ike gburugburu ebe obibi usoro nlekota oru
Isi ojii kọmputa ụlọ oriri ike nlekota usoro
Ike nkwukọrịta, UPS
Battery nlekota oru usoro
Site na mmepe ngwa ngwa nke nchekwa mmiri na China, na mmejuputa nke National South-to-North Water Diversion Project, ihe achọrọ maka "nlekota akpaaka nke ndị na-adịghị ele anya, mmadụ ole na ole nọ n'ọrụ" na nchekwa nchekwa nke ụlọ ọrụ nchekwa mmiri bụkwa. na-abawanye.
Nlekọta ndoli nke ọdịnala na-eji ihe mmetụta nrụgide ibu iji tụọ ihe nkwụsị / nrụgide iji ghọta nchedo oke nke ibu moto. Usoro a abụghị naanị ihe siri ike ịwụnye ma debe, mana nke ka mkpa bụ na ihe bụ isi nke ụdị ihe mmetụta a - nrụgide Mmetụta ihe na-emetụ n'ahụ nke nwere nsogbu dị ukwuu maka nsogbu gburugburu ebe obibi dịka nsị nke ikuku dị n'èzí, mmebi kpatara site na ịma jijiji, na ịka nká nke nrapado oyi akwa mere site ogologo oge were oge. Tụkwasị na nke a, n'ihi na ọtụtụ ike a tụrụ site na ngwa ngwa dịtụ obosara, izi ezi nke ụdị ntụgharị ike dị ala dị ntakịrị, ọ na-esikwa ike iru ihe ngwa chọrọ nke ubi ahụ.
Okwu ikpe - Ọgụgụ Isi Nlekota Ime Obodo Maka Mgbapụta Nke Ọma
Site na mmepe nke teknụzụ njikwa teknụzụ, ikuku ikuku na-ejikwa usoro telemetry eme ihe n'ọtụtụ ebe na olulu mmanụ ụlọ. Isi ihe mmetụta dị mkpirikpi kọwara n'okpuru:
1. Pumping unit ọma ike nlekota (atọ-adọ voltaji na ugbu a ọsọ ọsọ, RS485 mmepụta)
Ngwunye ihe dịpụrụ adịpụ nke nwere ọgụgụ isi emere maka maka olulu mmiri iji dochie ndị analog transmitters. Ihe mgbaàmà nchọpụta bụ AC 3-phase voltage na 3-phase current; mmepụta ọdịnaya bụ 3 voltage (uru bara uru), 3 dị ugbu a (uru bara uru), ike ọrụ, ike reactive, ihe ike, ike ọrụ, na ike reactive na data ugboro. Mmepụta nwere ike ịnweta ọnụọgụ ọnụọgụ nke nọmba ọnụọgụ eletriki chọrọ site na mkparịta ụka nkwukọrịta, ọ chọghịkwa ka RTU mee nlele AC.
2 raara onwe ya nye ihe nrụpụta ihe (nso: 0 ~ 150kN; mmepụta uche: 1mVV)
Mgbe ihe karịrị afọ iri nke ojiji na mmanụ mmepụta mmanụ, ọ na-mma mgbe niile; emechiri emechi na usoro mmiri na-ezukọ iji mee ihe niile ihu igwe; plọg kachasị mma maka ịdabere na ya; ọrụ dị mfe ma dị mma; na-agbanwe agbanwe na mmechi zuru ezu.
3.Pressure mmetụta (nso: site 0 ~ 10Kpa ka 0 ~ 500Mpa, mmepụta: ọkọlọtọ abụọ-waya usoro)
Ngwaahịa a na-eji ihe eji eme mmanụ mejupụtara mmanụ ma ọ bụ akụkụ igwe anaghị agba nchara niile iji jikọta usoro mwekota nke steeti na teknụzụ dị iche iche. A na-etinye mgbawa na-ekesa silicon n'ime oghere nke jupụtara na mmanụ silikọn, site na diaphragm igwe anaghị agba nchara na mkpuchi dị n'èzí na-ewepu ya site na usoro nha. Ngwaahịa a nwere ike ịrụ ọrụ n'ọnọdụ ọjọọ.
4. Ihe mmetụta ntụgharị nke akụkụ (nso: 0 ~ 100, 0 ~ 180, 0 ~ 270, 0 ~ 340 [na-aga n'ihu] nrụpụta 0-5V)
Ngwaahịa a bụ ihe mmetụta maka iji tụọ ọnọdụ ntụgharị nke ihe nwere njikọ dị n'agbata mmepụta voltage na ntụgharị ntụgharị. Ejiri oke nkenke, ogologo ndụ, ọfụma na-arụ ọrụ dị mma na ihe ndị ọzọ.
5. Okpomọkụ mmetụta (wellhead okpomọkụ PT1000 eguzogide mmepụta)
Mbubata PT1000 ngwugwu; static mgbali eguzogide karịrị 30Mpa; oge nzaghachi okpomọkụ dị ngwa; Enwere ike ikpebi mmetụta mmetụta dịka njirimara onye ọrụ chọrọ; arụ ọrụ okpomọkụ: -50 ° C ~ +400 ° C, ziri ezi ọkwa A.
6. Infrared sọrọ supervision (atọ Monitors mkpu ihe mmetụta)
Onye na-enyocha windo elu-arụmọrụ dị elu nke nwere teknụzụ kachasị elu na mpaghara nchekwa taa nwere nna ukwu ohu abụọ-otu nkenke nkenke na-achọpụta ihe na infrared na circuit mgbochi na ihe omimi dijitalụ.